Ungenza kanjani uhlu lwakho lomkhiqizo we-Amazon luphumelele?
i-Amazon iyinhlangano enkulu ye-e-commerce emhlabeni jikelele. Isebenza ngokufana kakhulu nezinye izinjini, ukuhlinzeka abasebenzisi ngemiphumela yomkhiqizo efanele kwimibuto yabo. Kuyaphawuleka ukuthi ucabanga ngokusebenza kahle nokuthi indlela engcono kakhulu yokusebenza ngayo ingashintsha njalo ngonyaka - monitor temperature remotely. Njenganoma yiziphi ezinye izinjini ezithandwayo, i-Amazon inezimiso zayo kanye nemihlahlandlela okudingeka ulandele ukuze ibonakale kumakhasimende akho angahle. Kuyindawo emakethe yokuncintisana kakhulu lapho uzokhipha khona abaholi bakho be-niche; udinga ukutshala ukuhlelwa kokuhlelwa komkhiqizo wakho we-Amazon.
Uma ungakaze ukhathazeke ngokuthuthukisa imikhiqizo yakho ye-Amazon, awunawo ukuhamba, kodwa manje yisikhathi esihle sokuqala ukudala isu. Lesi sihloko senzelwe ukukubonisa indlela yokwenza uhlu lwakho lomkhiqizo we-Amazon luguqulwe kahle futhi ludonse amakhasimende angaphezu kwamandla avela kusesho.
Amasu asebenzayo wokuthuthukisa uhlu lwakho lomkhiqizo we-Amazon
Ukwenza uhlu lwakho luwusizo, udinga ukuhlinzeka abasebenzisi ngemifanekiso yomkhiqizo ongcono kakhulu. Indlela kuphela ukuthi amakhasimende akho angakwazi ukuhlola umkhiqizo abazowuthengisa yizithombe zomkhiqizo kuzo zonke izintelezi ezahlukene. I-Amazon inezidingo zayo zesithombe somkhiqizo ezifaka imininingwane yezobuchwepheshe nezindinganiso ze-Amazon zesithombe somkhiqizo wesithombe. Isimo sesisekelo semfuneko yesimo semifanekiso sokuthi isithombe kufanele sigxilwe, sibheke ngokucophelela noma sitholwe, ngombala ongokoqobo kanye nemiphetho ebushelelezi. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ugcwalisa u-85% noma ngaphezulu kohlaka lwesithombe.
Izithombe ozihlinzekela ukufakwa kuhlu komkhiqizo ngokuvamile ziyenzeka noma ziphule ama-searcher ama-Amazon amaningi. Yingakho kufanele ubenze bacindezele ngokwanele ukuheha abaseshi bama-Amazon bathenge umkhiqizo wakho.
Thuthukisa isihloko sakho somkhiqizo
Kufanele ufake yonke imininingwane ebalulekile ezinhlamvu ezingu-200 zesihloko sakho. Ungadluli isihloko sakho ngamagama angukhiye noma ama-slogans asetshenzisiwe. incazelo enembile yomkhiqizo ehlanganisa umbala wento, isisindo sayo, ubukhulu, nezinye izici ezidingekayo.Isihloko sakho sinezici eziningi, ngcono. Isihloko sakho kufanele sinikeze ulwazi olwanele lomuntu ozokwenza isinqumo sokuthenga.
Ngokwemihlahlandlela ye-Amazon, kufanele ulandele ifomula ekhethekile ukusiza ukudala iziqu zakho. Le fomula ibheka njenge-"brand + model model + igama lomfanekiso + lomkhiqizo
Finyelela ikhono lakho lomkhiqizo ngokusebenzisa incazelo kanye namaphoyinti-bullet
Uma uvula ama-Amazon Ikhasi lomkhiqizo, ungabona amaphuzu e-bullet ngaphansi kwesihloko. Lapha ungakwazi ukuchaza maduzane ukuchaza izakhi zento yakho ama-stics futhi ngokuyisisekelo asebenzise amagama akho angukhiye ahlosiwe. Awukwazi ukweqa lesi sinyathelo njengoba kusiza abasebenzisi ukwenza isinqumo sabo sokuthenga.
Nokho, kubalulekile ukwengeza incazelo eningiliziwe yomkhiqizo wakho. Ngezinye izikhathi abathengisi be-intanethi badidekile mayelana nencazelo bese bakhohlwa ukuyengeza ngokuphelele. Ezimweni eziningi, amaphuzu we-bullet awakwazi ukuphendula yonke imibuzo yomsebenzisi emayelana nemikhiqizo oyithengisayo. Yingakho udinga ukuyichaza ngokuningiliziwe, ukuhlinzeka ngamakhasimende akho angahle nawo wonke izinzuzo zomkhiqizo nezici. Akufanele ubhale lapha mayelana nenkampani yakho noma ungeze imininingwane yephromoshini. Umsebenzi wakho oyinhloko ukwenza isethulo sento oyithengisayo.